Prôtevanjelin'i Jakoba - Wikipedia
Ny Prôtevanjelin'i Jakoba, izay atao hoe koa Fahaterahan'i Maria, Fanambaran'i Jakoba na Evanjelin'i Jakoba dia soratra apokrifa pseodepigrafika karazan'ny atao hoe "evanjelin'ny fahazazana" izay voasoratra teo an-tenantenan'ny taonjato faha-2 taor. J.K. (taona 145).
1 Tanjon'ny boky
2 Votoatin'ny boky
Tanjon'ny boky[hanova | hanova ny fango]
Ho an'i Simon Claude Mimouni, izay tsy mitovy amin' izay lazaina matetika, dia tsy tantara enti-kampita fahendrena avy amin' ny tontolon' ny vahoaka fa lahatsotatra fanadihadiana sahala amin' ireo fanadihadiana ny midrasa (midrash) fahita maro ao amin' ny literatiora jiosy amin' ny firehana rehetra. Tokony ho roa ny tanjona tratrarin' ilay boky, dia ny hamaha ny olana apetraky ny tsy fifanarahan-kevitra anatiny sy avy ivelan'ny fivavahana kristiana tamin' ny fotoanandrony.
Andaniny dia enti-miady amin' ny fifandirana eo amin' ny tontolo jiosy izay manao an' i Maria ho tsy madio sady mpijangajanga bevohokan' ny miaramila romana atao hoe Pantera: tsy ny fahaterahana mahagagan' i Jesoa ihany no ambaran' ny mpanoratra fa ny fahaterahan' i Maria koa, izay natokana ho an' ny Tempoly hatramin' ny fahazazany sady maneho araka izany ny fahadiovany izay hamafisin' ireo manampahefan' ny asam-pisoronana. Tsy dia voalaza ho fomba jiosy anefa ny fanokanana virijiny ho an' ny Tempoly.
Ankilany dia angamba koa valin-teny ho an'ireo Kristiana gnostika, manaraka ny doketisma sy ny adoptianisma izany. Noho izany dia tapian' ireo firehana izay nahatonga ny fanoratana tantara neken' ny Fiangonana ho kanonika momba ny fahazazan' i Jesoa izay voasoratra am-polo taona mialoha io soratra io.
Votoatin'ny boky[hanova | hanova ny fango]
Voatonona ao amin' ny fitantarana ny anaran' ireo ray aman-drenin' i Maria, izay tsy hita ao amin' ireo evanjely kanônika, tsy iza izany fa i Ana sy i Joakima. Natokana ho an' Andriamanitra tamin' ny alalan' ny voadin-dreniny i Maria, ary i Josefa izay efa lahiantira sy maty vady sady nanan-janaka lahy maro (zanany tamin' ny fanambadiany voalohany), dia voafidy haka an' i Maria mbola zazavavy ho eo ambany fiahiany.
Voatantara ny fomba nampitoe-jaza an' i Maria izay tsy nahavery ny maha virjina azy ary ny niterahany an' i Jesoa. Mamelatra ny lohahevitra ny amin' ny tantaran' ny fahaterahan' i Jesoa tao amin' ny zohy izany soratra izany (Prot. Jak. 18.11): teo am-pandehanan' ny Ankohonana masina avy any Nazareta hankany Betlehema dia nidina avy teny amin' ny boriky nitaingenany i Maria izay efa nitoe-jaza mba hiala sasatra teo akaikin' ny lava-drano iray, tao amin' ny tananan' i Bir-el-Quadismu (anarana arabo midika hoe "vovon' ny fialan-tsasatra"). Tsy tonga tany Betlehema izy, ka nampiditra azy tao amin' ny zohy iray i Josefa sady nametraka ireo zanany lahy teo akaikin' i Maria. Raha mbola tany am-pitadiavana mpampivelona jiosy tao amin' ny faritr' i Betlehema i Josefa dia niseho tamin' ny fomba mahagaga tao anaty zohy i Jesoa.
Miezaka ny hanohitra ny fitsikerana ny finoana kristiana tamin' izany fotoana izany ilay boky ka manambara indrindra fa zanak' i Josefa sy i Maria i Jesoa. Manantitrantitra ny maha virjiny an' i Maria izay voamarin' ilay mpampivelona sy i Salome taorian' ny fahaterahan' i Jesoa koa ny soratra.
Ny mpanoratra ny boky, izay milaza ny tenany any amin'ny faran'ny boky fa i Jakoba, rahalahy tsy iray reny amin' i Jesoa, dia olona tsy fantatra ary ny fotoana nanoratany dia tokony ho tamin' ny tenantenan' ny taonjato faha-2 ary angamba tany Ejipta na tany Siria. Heverina ho anarana indrana ny hoe Jakoba ka noho izany dia pseodepigrafa ilay boky. Ny maha pseodepigrafika an' ilay boky dia asehon' ny tsy fahalalan' ny mpanoratra, izay tsy Jiosy, ny momba an'i Palestina sy ny fomba amam-panaony. Mahalala tsara ny fitantarana ao amin'ireo Evanjely efatra anefa ny mpanoratra.
Ny didim-pitondrana navoakan'ny Fiangonana katolika, ilay atao hoe Didim-pitondran'i Gelasio, ao amin'ny fizarana faha-5 — izay nosoratan'olon-tsotra tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-6 — ny mampiditra azy ao amin'ny lisitry ny boky apokrifa, nefa nakasitrahan'ny Kristiana tatsinanana io boky io izay voadika betsaka tamin'ny teny grika sy amin'ny fiteny tamin'ny Andro Taloha hafa koa. Mbola ampiasaina ilay boky ao amin'ny monastera tatsinana sasany, ka vakina amin'ny fotoana ankalazana ny fahaterahan'i Maria.
Na dia eo aza ny tsy fahazoazoana an'io boky apokrifa io dia tsapa ny fiantraikany ao amin'ny litorjia araka ny asehon'ny famoronana ireo fety fankalazana an'i Maria toy ny Fahaterahan'i Maria, ny Fanehoana tao amin'ny Tempoly na ny Fitoe-jazan'i Ana. Misy vokany lehibe teo amin'ny fanaovan-tsary masina momba ny fahazazan'i Maria na ny an'i Jesoa koa io boky io.
Tao amin'ny Fiangonana tatsinana dia niely manerana ireo fanamboarana tranainy an'ilay boky amin'ny teny latina — ny Evanjelin'i Pseodo-Matio (taonjato faha-6) — ary tamin'ny Andro Antenantenany — ny De Nativitate Mariae ("Fahaterahan'i Maria") (taonjato faha-9). Misy andalana sasany izay hita ao amin'ny Fanangonana J.
Entina manorina ny fotopampianarana ortodoksa momba ireo "rahalahin'i Jesoa" voalaza ao amin'ny Testamenta Vaovao, izay ampianarina fa rahalahy tsy iray reny fa nateraky ny vady voalohan'i Josefa:
« Ary ny mpisorona be niteny tamin 'i Josefa hoe: "Voatendry noho ny safidin'Andriamanitra ianao mba handray ity virijinin'ny Tompo ity ka hiambina azy eo akaikinao". Ary nanda izany i Josefa ka nilaza hoe: "Manan-janaka aho sady antitra, nefa izy mbola tanora dia tanora; matahotra aho sao hihomehezan'ny zanak'i Israely. » (Prot. Jak. toko faha-9).
Ny filazana fa efa antitra i Josefa dia angamba ahafahana manatsoaka hevitra ny amin'ny maha virijiny mandrakizay an'i Maria. Tamin'ny taonjato faha-4 dia toy izany no fahazoan'ny Rain'ny Fiangonana maro, izay nanandratra avo ny fahadiovana ao amin'ny fitiavam-bavaka kristiana.
Ireo evanjelin'ny fahazazana
Evanjelin'ny Fahazazana araka an'i Tômasy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Prôtevanjelin%27i_Jakoba&oldid=995533"
Voaova farany tamin'ny 31 Jolay 2020 amin'ny 10:13 ity pejy ity.